> Resource > Video > Sida loo Guba una Copy DVD in DVD
Haddii aad rabto in aad dib ilaa cajalladaha DVD ama DVD files waxa aad disk adag galay DVD disc kale oo bannaan, waxaad ka akhrisan kartaa iyada oo maqaalkan oo aad hesho xal deg deg ah oo fudud. Maqaalkani waxa uu u qaybsan yahay laba qaybood. Kaliya Waxaad dooran waxa aad xiisaynayso in uu akhriyo.
Qaybta 1aad: Sida loo gubi DVD in DVD (dib DVD files)
Qeybta 2: Sida loo nuqul DVD in DVD (dib DVD cajalladaha)
Qaybta 1aad: Sida loo gubi DVD files si DVD
Waxaa jira waxyaabo badan oo ah noocyada file DVD, sida VOB, ISO, Video_TS files folder, iwm Waxaad iyaga ka heli kartaa iyada oo channels iyo habab kala duwan, waxaad tidhaahdaan, waad dooxi doontaa DVD, download ka Internet, share dadka kale, iwm Marka ay mashquulin iyo aad u badan qolka lagu kaydiyo, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad ku gubi galay disc DVD qol keydinta, ama ilaalinta joogtada ah a. DVD Gubasho ka DVD files sidoo kale waa hab fiican si aad u daawato DVD filimada on ciyaaryahan DVD standalone. Marka laga nooca DVD faylasha aad, Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) kaa caawin kara inaad iyaga gubi in DVD disc ah, si aad u ciyaari karaa ciyaaryahan DVD caadiga ah.
Hawlgalka ayaa waxaa aad u sahlan, iyo interface waa mid aad u sahlan. Sidaas, xitaa haddii ay markii ugu horeysay si aad u isticmaasho softwre tan, waxaad weli ku dhameysan karto geeddi-socodka oo dhan si dhakhso ah. Just dajiyaan DVD faylasha aad galay ay Gubashada interface, dooran template menu DVD ah, gelin maran DVD 5 ama DVD 9, ka dibna riix "Guba" button rukun ee hoose-saxda ah ee interface ka.
Wondershare Video Converter Ultimate (Video Converter Ultimate for Mac) Waxaa ka buuxa badan oo qalab dheeraad ah, waxaad dhahdaa, qalab video tafatirka, qalabka DVD dooxeen, video duuban qalabka. Waxaa la odhan kara, software ka dhan-in-mid kulmi kartaa ku dhowaad dhammaan baahida multimedia aad.
Qeybta 2: Sida loo nuqul DVD in DVD
Mararka qaarkood aad rabto in aad dib aad DVD disc qaali ah haddii khasaare aan la filayn, ama aad rabto in aad u soo dirto nuqul saaxiib ama qoyska sida hawl hadiyad ah. Wakhtigan, waxaa laga yaabaa in aad u malaynayso ee dayanayaan DVD. Uma baahnid in aad inay hareeraha eegaan u sida DVD aad u weyn in qalab nuqul DVD. Ay u badan tahay in aad ka dib waxba raadinta dheer heli. Waayo, kanu, Wondershare Video Converter Ultimate ( Video Converter Ultimate for Mac ) ayaa sidoo kale gargaar weyn.
Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Uu leeyahay muuqaalada aad u badan, iyo mid ka mid ah taas oo ah in aad nuqulka DVDs guriga. Si toos ah gelisaa DVD disc in aad rabto in aad nuqul ka, ka dibna waxaa nuqul ka si aad u computer. Marka lagu sameeyey, waxaad u baahan tahay inaad tuurid disc DVD iyo sii wadaan in ay geliso DVD faaruq, ee la soo dhaafay, nuqul ka faylasha gurmad kombiyuutarka si DVD ah disc cusub.
Dadka isticmaala Windows, waxaad u baahan tahay in ay isticmaalaan versrion Windows barnaamijka si dooxi aad DVD disc oo u badbaadin doonaa qaab video ah (sida VOB iwm) on your computer. Markaas, jiidi files DVD ee barnaamijkan si ay u gubaan galay DVD disc cusub, iyo qaliinka waa isku mid sida Qaybta 1aad.